प्रभु ग्रुप Archives - TV Annapurna
Category: प्रभु ग्रुप
सार्क एशियामै पहिलोपटक ओटीटी प्रणालीमा आधारित प्रभु टिभीको शुभारम्भ
June 19, 2018 June 19, 2018 TV-Annapurna
विश्वकपको महाकुम्भ मेला चलिरहेका बेला प्रभु समूहले प्रभु डिजिटल टीभीको सेवा सुरु गरेको छ । प्रभु टीभीले नेपालमा पहिलो पटक डिजिटल भिडियो प्रसारण (डीभीपी–टी २) मा आधारित सेवा विस्तार गरेको हो । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रभु समूहका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले सेवाको प्रदर्शन गरी प्रभु टेलिभिजनको उद्घाटन गरेका हुन् । सूचना प्रविधिको विकासको क्रमसँगै ओटीटी प्रणालीमा आधरित भएर माेबाइल, ट्याब्लेट तथा ल्यापटपमा समेत आफूले छानेको च्यानल हेर्न सकिने जनाइएको छ । प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष भट्टचनले यो प्रविधि सुरु गर्ने सार्क राष्ट्रमै नेपाल पहिलो भएको बताए । ‘सार्क राष्ट्रमै नेपाल पहिलो…
अर्थ / वाणिज्य, प्रभु ग्रुपLeaveacomment
प्रभु बैंकले ल्यायो थप चार नयाँ शाखा सञ्चालनमा
May 13, 2018 May 13, 2018 Annapurna TV
प्रभु बैंक लिमिटेडलेले चार नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले बाग्लुङ र दैलेखका विभिन्न तीन स्थानमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।बैंकले बाग्लुङका निसीखोला गाउँपालिका वडा नं. ४ र तमानखोला गाउँपालिका वडा नं.१ तथा दैलेखका भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नं। २ र लालिगुराँस गाउँपालिका वडा नं. ४ मा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।सञ्चालनमा आएका शाखाबाट सम्बन्धित स्थानीय तहका लाभग्राही लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
प्रभु टिभीको एण्टेना र ताररहित ओटीटी प्रविधीबाट टिभी प्रसारणको तयारी, फुल एचडी क्वालिटीमा
May 12, 2018 June 19, 2018 Annapurna TV
नेपालमा एनलग प्रविधिबाट स्वदेशी तथा विदेशी टेलिभिजनहरु हेर्ने गरेका थियौ । तारलाई खम्बाबाट लगेर टिभीमा जोड्नु पर्ने बाध्यता थियो । तर समयको परिवर्तनसँगै नेपालमा डिजिटल प्रविधिको टेलिभिजन आयो । जसले गर्दा तार विना केही प्रविधिको प्रयोगबाटै घर घरमा उच्च गुणस्तरको टेलिभिजन हर्ने अवसर हामीले पाएका छौं । अझ भनु यसले गर्दा नेपालको कुना कुना टेलिभिजन हेर्न पाएका छन । नेपालमा अहिले आधा दर्जन डिजिटल प्रविधिमा संचालित छ । जसले आफ्नो तर्फबाट उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गरेको दाबी गरिरहेका छन् । नेपालमा सरकारबाटै एनलग प्रविधिको पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने आदेश…
पर्वतको विहादीमा प्रभु बैंकको नयाँ शाखा
May 3, 2018 Annapurna TV
प्रभु बैंकले बुधबारदेखि नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले पर्वत जिल्लाको विहादी गाउँपालिका वडा नं ४ मा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो।उक्त शाखाको विहादी गाउँपालिका अध्यक्ष कमल भुसालले उद्घाटन गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको सो शाखाबाट स्थानीय तहका सेवाग्राही, सर्वसाधारण, फर्म, कम्पनी तथा संघ–संस्था लाभान्वित हुने बैंकले जानकारी दिएको छ । उक्त गाउँपालिकको समग्र आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने बैंकको दाबी छ ।
अर्थ / वाणिज्य, प्रदेश- ४, प्रभु ग्रुपLeaveacomment
April 23, 2018 TV-Annapurna
प्रभु बैंकको नयाँ शाखा ज्ञानेश्वरमा स्थापना भएकोे छ । काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.३० (साविक का.म.न.पा.वडा नं.३३) मा शाखा संचालन भएको हो । बैंकको ज्ञानेश्वर शाखा कार्यालय बैंकका संचालक पुष्प बहादुर प्रधानज्यूले एक समारोहका विच समुद्घाटन गरेका छन् । मर्जरको क्रममा एकै स्थानमा दोहोरिन गएका बैंकका शाखा कार्यालयहरु मध्ये प्रभु बैंक लिमिटेडको दरवारमार्ग शाखा कार्यालयको कारोबारलाई कमलादी शाखामा गाभी बैंकको दरवारमार्ग शाखा कार्यालयलाई ज्ञानेश्वरमा स्थानान्तरण गरिएको प्रभु बैंकले बताएको छ । यसका साथै मर्जरको क्रममा दोहोरिन गएका बैंकका अन्य शाखा कार्यालयहरु पनि क्रमशः स्थानान्तरण गर्दै जाने बैंकको योजना रहेको छ ।…
प्रभु ग्रुप, समाचारLeaveacomment